खानपिन, योगा र नियमित चेकजाँचः मृगौला बचाउने उपयुक्त उपाय
बुधबार, कात्तिक १२, २०७७ ०५:५०:५३ युनिकोड पुरानो वेबसाइट
डा. संजीव आचार्य (नेफ्रोलोजिस्ट)
आईतबार, असोज ४, २०७७ विश्वास भट्टराई
पछिल्लो समय नेपालमा मृगौला रोगको समस्या जटिल बन्दै गइरहेको छ । नेपालमा कूल जनसंख्याको १० प्रतिशत अर्थात करीब ३० लाख मानिसमा कुनै न कुनै रुपमा मृगौलाको समस्या रहेको विभिन्न अध्ययन अनुसन्धानहरुले देखाएको छ । यीमध्ये तीन लाख मानिसको मृगौला बिग्रिरहेको छ । हरेक वर्ष नेपालमा मृगौलाका ३ हजार नयाँ बिरामीहरु थपिने गरेका छन् । यस्तै, ४ हजारभन्दा बढी नयाँ डायलासिस गर्नेहरु थपिने गरेका छन् ।
तर कतिपय विरामी र विरामीका आफन्तहरुले सरकारले उपलब्ध गराएको सेवाका बारे जानकारी नहुँदा राम्रोसँग उपचार नपाई ज्यान गुमाउनु परिरहेको छ । यस्तै कतिपयको जीवनभरको कमाइ र घरजग्गा नै उपचारमा सकिएको छ । कतिको उपचारका कारण घरबारविहीन हुनुपर्ने मात्र भएको छैन विरामीको उपचार नै असफल भएका घटनाहरु हामी गाउँघरमा देख्न र सुन्न पाउँछौं । यसै सेरोफोरोलाई लिएर डा. संजीव आचार्य (नेफ्रोलोजिस्ट) सँग खोजतलासका लागि विश्वास भट्टराईले गरेको कुराकानी :
कोरोना भाइरसको महामारीको अवस्थामा किड्नीका विरामीहरुको सुमेरु अस्पतालले कसरी उपचार गराइरहेको छ ?
कोरोना भाइरसको महामारी फैलिरहेको अवस्थामा हामीहरुले मृर्गाैलाका विरामीको अवस्था हेरी उपचार गरिरहेका छौं । विशेष गरी हाम्रो नेफ्रोलोजी टीमले मृर्गाैलाका विरामीहरुलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ । डायलासेस गर्ने विरामीहरु साथसाथै हामीले अन्य मिर्गौलाको समस्या भएका बिरामीहरूलाई पनि हेर्नुपर्दछ । उपत्यका बाहिरका तथा भित्रका धेरै बिरामीहरू जो चेकअप गर्न आउन सक्नुहुन्न, फोन वा भाइबरमार्फत् सल्लाह प्राप्त गर्नु हुन्छ । कोरोना भाइरसको संक्रमणको अवस्थामा डायलासेस गर्नुपर्ने शंकास्पद विरामी, उपत्यका बाहिरबाट आउने विरामीहरुलाई पीसीआर चेकजाँच गरी छुट्टै आइसोलेसनमा राखी उपचार गर्ने गरिएको छ । यदि कोरोना भाइरस पोजेटिभ देखिएको अवस्थामा तिनीहरुलाई छुट्टै आइशोलेसन कोभिड वार्डमा राखी उपचार गरिरहेका छौं । साधारण तया नेगेटिभ देखिएका विरामीहरुको हकमा भने साधारण वाडमै राखी उपचार गर्ने गरिरहेका छौं । उपचारकै क्रममा एउटा विरामीको साधारण डायलासिस गरिरहेको अवस्थामा एक्कासी ज्वरो बढेपछि उनको पीसीआर चेकजाँच गर्दा कोरोना भाइरस पोजेटिभ देखियो । त्यसपछि ती विरामीलाई बेग्लै कोभिड आइसोलेसनमा राखी केही दिन उपचार गरेपछि उनलाई ठिक पार्न सफल भयौं । यस्ता केहि विरामीहरुलाई यसरी नै उपचार गरी निको पार्ने कोसिस गरिरहेका छौं । सुरुमा केही गम्भीर बिरामीहरूलाई कोभिड आईसीयुको अभावका कारण कोभिड डेडिकेटेड अस्पतालमा रेफर गरियो ।
मृगौला कस्तो खाले रोग हो ? यो कसरी लाग्छ ?
मृर्गौलाको रोग भन्नुपर्दा यो रोग लक्षण बिना पनि वा लक्षणको साथ प्रस्तुत हुन सक्छ । कहिलेकाँही जीवन जोखिममा पार्ने लक्षण साथ प्रस्तुत हुन सक्छ । मृर्गौला हाम्रो महत्वपुर्ण अंग हो, हामी जन्मदै ढाडको पछाडिपटि मेरुदन्डको दायाँबायाँ दुईवटा मृर्गौला हुन्छ । मुटु, कलेजो, फोक्सो जति महत्वपूर्ण हुन्छ त्यति नै मृर्गाैला पनि महत्वपूर्ण अंग हो । मृगौलाले विभिन्न काम गर्छ । जस्तो शरीरमा पानी, लवणको (सोडियम, पोटासिमय, क्लोराइड, क्याल्सियम, फस्फोरस) मात्रा लेवलमा राख्ने, रक्तचाप नियन्त्रण गर्ने, अम्ल तत्वको व्यालेन्समा राख्ने काम गर्छ । शरीरमा कोसिकाहरुले निकाल्ने फोहर, केमिकल र मेडिसिन पिसाबबाट बाहिर निकाल्छ । हड्डीलाई अतिआवश्यक भिटामिन डी सकृय रुपमा उत्पादन गर्छ जसले हडड्ी बलियो बनाउँछ । रातो रक्त कोशिका बनाउनको लागि एरिथ्रोपोएटिन हर्मोन उत्पादन गर्दछ । हाम्रो शरीरमा मुटुले हरेक पल, सामान्यतया ६० देखि १०० प्रति मिनेट रगत पम्प गरेको हुन्छ । त्यो पम्प गरेको २० प्रतिशत रगत रेनल धमनीमार्फत् मृगौलामा जान्छ । किडनीको नेफ्रोन भनिने फङशनल एकाई हुन्छ । नेफ्रोनको दुई भागहरू छन्— ग्लोमेरुलस र टुबुलेसहरु प्रत्येक मिर्गौलामा १० लाख नेफ्रोन हुन्छ । एउटा रेनल धमनी प्रत्येक नेफ्रोनमा रगत आपूर्ति गर्न धेरै पटक विभाजन हुन्छ, त्यसपछि मृगौलामा भएका सानासाना १० लाख नसाको जुगुल्टो (ग्लोमेरुलस) बन्छ, ती नसाले रगतलाई फिल्टर गर्छ र ट्युब्यूलहरूमा जान्छ् । प्रत्येक ट्युब्यूलहरूले चाहिने कुरा राख्छ, नचाहिने कुरा पिसावको रुपमा फाल्ने काम गर्छ । प्रत्येक ट्युब्यूलमा बनेको पिसाव (एउटा मिर्गौलामा १० लाख टुबुलेस हुन्छ) रेनाल पेलभिसमा संकलन हुन्छ र अन्तमा युरेटर भनिने नलि मार्फत् मूत्राशयमा (युरिनरी ब्लाडर) संकलन हुन्छ । पिसाव भनेको वास्तवमा रगतबाट बनेको हो । मृगौलाले सुगर, नुन, क्याल्सियम, पोटासियम, पानी, अम्ललगायतका तत्व फिल्टर गरी चाहिने लवण, पानी राख्छ, काम नलाग्ने फोहर चिज फाल्ने गर्छ ।
मृगौला रोग कसरी लाग्छ भन्दा निम्न कारण हुन सक्छनः
— निरन्तर झाडापखाला लाग्दा वा बान्ता हुँदा, अत्याधिक गर्मीमा काम गर्दा वा बस्दा (शरिरमा पानीको मात्र कम हुँदा)
— संक्रमण को कारणले, हृदय रोग को कारण, भारी रक्तस्राव को कारणः कम रक्तचाप हुँदा
— ग्लोमेरुलोनेफ्राइटि (पिसावमा प्रोटिन लिग हुँदा)
— दुखाई कम गर्ने (पेन किलर), जथाभाबि औषधी, एन्टीबायोटिक लिँदा
— अनियन्त्रित मधुमेह र उच्च रक्तचाप
— अरिङ्गाल टोक्दा
— मृगौला पत्थरी, प्रोस्टेट ट्यूमर, अरु कुनै ट्यूमरको कारनले मृगौलामा बनेको पिसाव जाने नलि वा मूत्राशयमा अवरोध भएमा
पछिल्लो समय मृगौला रोगीको संख्या बढ्ने क्रममा छ, यो नियन्त्रणका लागि कस्ता उपाय अप्नाउनु पर्छ ?
रोग लागेर निको पार्नुभन्दा रोग नै लाग्न नदिनु उचित हुन्छ । मृगौला बिग्रेको लक्षण पहिला केही थाहा नहुन सक्छ । यो रोगको नियन्त्रणको लागि सम्भव भएसम्म सपरिवारले प्रत्येक वर्ष मृगौलाको परिक्षण गराउनुपर्छ । मधुमेह वा उच्चरक्त चापबाट बच्नुपर्छ, प्रत्येक ३ देखि ६ महिनामा चेक गराउनुपर्दछ । स्वस्थ्य व्यक्तिले पनि कम्तिमा बर्षको एक चोटी मृगौलाको परीक्षण गर्नुपर्छ । प्रशस्त सफा पानी पिउनुका साथै जथाभावी औषधी सेवन गर्नुहुँदैन् । धुम्रपान तथा मद्यपानबाट टाडै रहनुपर्छ । पोषणयुक्त संयमित आहार खानुपर्छ । नियमित योगा र व्यायम गर्नुपर्छ । बच्चालाई प्रत्येक पटक ज्वरो आउँदा पिसाब चेक गराउनुपर्दछ । मृगौला रोग लागि हाल्यो भने चिकित्सकको सल्लाह बमोजिम औषधी सेवन गर्नुपर्छ । यो रोग नियन्त्रणका लागि सरोकार निकाए, सरकार, चिकित्सक, जनता सवै मिलेर जनचेतना फैलाउनु पर्छ । मृगौला रोगका लक्षणहरु, पिसाब धमिलो हुने, धेरै पटक वा कम पिसाब लाग्ने, पिसाबमा फिज जाने, थकाइ लाग्ने, रिङ्गटा लाग्ने, लगातार वाकवाकी आउने, हात खुट्टा सुन्निने, भोक नलाग्ने, छाला चिलाउने आदि लक्षणहरु हुन सक्छ । मृगौलाले हर्मन बनाउने काम विस्तारै गर्न छाड्नु, रगत कम हुँदै जानु र मृगौलामा समस्या आए पछि बल्ल त्यसको लक्षणहरु देखा पर्न सक्छ ।
कति प्रतिशत मृगौलाको बिग्रिसकेपछि यसको लक्षण देखा पर्न थाल्छ ?
डाइग्नोसिसमा दुईवटा कुरा हेर्नु पर्छ । एउटा एक्युट किड्नी इन्जुरी (एकेआई) र क्रोनिक किड्नी डिजाइज (सीकेडी) । एक्युट किड्नी इन्जुरी हो भने एक्कासी मृगौला बिग्रिएर लक्षण साथ प्रस्तुत हुन सक्छ । यदि एक्युट किड्नी इन्जुरी भयो भने त्यसलाई रगतबाट क्रेटिनिने कति छ चेक जाँचगरी युरीन टेस्ट, अडर निडेड ब्लड टेस्ट, अल्ट्रासोनोग्राफी गरेर एकेआई हो कि सीकेडी हो भन्ने हेर्नुपर्छ । एकेआई हो भने के कारणले हो एभालुएसन गरेर ट्रिटमेन्ट गर्नुपर्छ । प्राय तिन महिनाभन्दा बढी किड्नीको समस्या रहिरह्यो भने मात्रै सीकेडीमा प्रोग्रेस गरेको मान्छौं । प्राय डायलासिस र किड्नी बाइओप्सी चाहिन सक्छ । एकेआईको सुधार पनि हुन सक्दछ । सीकेडीको पाँच चरण हुन्छ । पहिलो, दोस्रो, तेस्रो, चौंथो र पाँचौं चरण लिंग, उमेर, क्रेटिनीनेको भ्यालुबाट हामी इस्टीमेटम ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन रेट (इजीएफआर) निकाल्छौं । त्यसलाई उपचारको क्रममा किड्नीले फोहोर रगतलाई कत्तिको फाल्न सक्छ, रगतमा फोहोर कतिको छ त्यसको आधारमा हामीले स्टेचिङ गछौं । सीकेडी स्टेज तिन (इजीएफआर ३—६)बाट पेटिएन्ट्सको सिमटम सुरु हुन थाल्छ । जति जति क्रेटिनिने बढ्दै जान्छ इजीएफआर घट्दै जान्छ । इजीएफआर १५ देखि ३ हुन्छ त्यसलाई हामी सीकेडी ४ स्टेज भन्छौं । क्रेटिनीने मोर इनक्रेजेज, इएफजी हामी स्टेज फाइभ सीकेडी भन्छौं । स्टेज फाइभ सीकेडी, विरामीको सिमटम झन झन बढ्न थाल्छ । विरामी निड्स हेमोडायलासिस अथवा पेरिटोनियल डायलासिस र किड्नी ट्रान्सप्लान्ट नै सीकेडीको स्टेज फाइभ पुगेपछि गनुपर्ने हुन्छ ।
मृगौला रोग बंशानुगत पनि हुनसक्छ ?
मृगौला रोग बंशानुगत पनि हुनसक्छ । पोलिसाइटिक किड्नी डिजिज् अर्थात् एउटा साधारण बंशाणुगत रोग हो । यो डिजिजमा दुबै किड्नीमा उमेर बढ्दै गएपछि सानो सानो सिम्टम देखा पर्छ यो ४ वर्ष पुगेपछि देखा पर्दछ । कसैकसैको २ देखि २५ वर्षबाट सुरु हुनसक्छ । युरियन इन्फेक्सन, युरियनमा ब्लड जाने, किड्नीमा स्टोन हुने, ब्लडप्रेशर हाई हुने र उमेर बढ्दै जाँदा किड्नी फङसन डेटेरियरेट हुँदै जानसक्छ । किड्नीको साइज बढेर धेरै ठुलो किड्नी हुनसक्छ, पेटको समस्याले हुनसक्छ, पछि गएर किड्नी फङसन घट्दै गयो भने डायलासिस अथवा किड्नी ट्रान्सप्लान्ट चाहिन सक्छ । लिभरमा पनि समस्या आउन सक्छ, कसैकसैलाई ब्रेनको अरटेरी एनेयुरिजम हुनसक्छ । यसको वर्षैपिच्छे डाइग्नोसिसको लागि परिवारमा कसैको एडीपीकेडी छ भने दाजु, भाई, बहिनी, दिदी, छोरा, छोरी सबैको युएसजी गरेर हेर्नुपर्छ । किड्नी फङसन चेक गर्नुपर्छ ।
कस्ता उमेरका व्यक्तिलाई यो रोग लाग्न सक्छ ?
सबै उमेरका व्यक्तिलाई हुनसक्छ । बच्चादेखि बुढासम्मलाई यो रोग हुनसक्छ । महत्वपूर्ण कुरा के हो भने मृगौलाको रोगको लक्षण मृगौला कामै नलाग्ने भएपछि पनि आउन सक्छ । त्यसैले त्यसैले वर्षको एक चोटी सबै वर्गका मान्छेले तिनवटा कुराको चाँज गराउनुपर्छ । पहिलो भनेको रगतमा क्रेटिनिने जाँच, दोस्रो पिसाव रुटिन र तेस्रो भिडियो एक्सरे गरेर पनि मृगौला रोगको बारेमा जानकारी पाउन सकिन्छ । क्रेटिनीन् बढेको खण्डमा तुरुन्त डाक्टरलाई चेकजाँच गराउनुपर्ने हुन्छ । यसबाट मृगौलाको केहि प्रोब्लम छ भने संकेत गर्छ । मृगौला रोग पहिलो मुख्य कारण भनेको मधुमेह हो । दोस्रो कारण भनेको उच्च रक्तचाप हो । तेस्रो कारण भनेको हाम्रो मृगौलामा भएको जुगुल्टो ग्लोमेरुलुजको इन्फ्लाम्मेसन (ग्लोमेरुलोनेफ्रिट्स) युरिनमा प्रोटिनले (प्रोटेनुरिया) ब्लड लिक हुनसक्छ । यो समस्या बच्चादेखि बुढासम्मलाई हुनसक्छ । मृगौलामा पानीको फोकाहरु जस्तो देखिने रोग (पोलिसाइस्टीक किड्नी डिजिज्) बंशानुगन कारण पनि हुनसक्छ, त्यसैले यस्ता परिवारका सदस्यहरुलाई हामीले वर्षको एक चोटी मृगौला चेकजाँच गर्न आग्रह गर्दछौं । त्यस्तै पिसाव चेक गर्दा हाई सुगरको मात्रा भएको छ कि छैन भन्ने पत्ता लगाउन सकिन्छ । यदि युरिन टेस्ट गर्दा सुगरको लिक देखियो, विरामीले डाइबेटिज अनकन्ट्रोल छ, विरामीले डाइबेटिज मेलुटस छ कि छैन भनेर डिटेल जाँच गर्नुपर्छ । लामो समयसम्म डाइबिटेज तलमाथि छ भने मृगौला बिग्रन सक्ने अवस्था भई डायलासिस समेत गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनसक्छ । भिडियो एक्सरेबाट भने कसैकसैको जन्मजात एउटा मात्र मृगौला पनि हुनसक्छ, त्यो थाहा पाउन सकिन्छ । बच्चामा कहिलेकाहिँ युरेटर स्ट्रचर भएर किड्नी सुनिएको हुन सक्छ । किड्नीमा स्टोन युरेटर ट्युवमा गएर युरिन फ्लोमा अब्स्ट्रुक गरेर किड्नी सुनिन सक्छ । बेलैमा त्यसको उपचार भएन भने भविष्यमा किड्नी फेलर गराउँछ । डायलासिस गराउने कन्डीसनमा पु¥याउँछ । कसैको एउटा बिग्रिसकेको पनि हुनसक्छ, सानो भएको हुनसक्छ यो पत्ता लगाउन सकिन्छ । अनि मृगौला बचाउन कस्तो उपचार गर्ने भन्ने बारे डाक्टरले सल्लाह सुझाव दिने कार्य गर्छन् । पिसाव थैलीमा स्टोन भरिएको अवस्थामा पनि पिसावको नलीमा अड्की मृगौला सुन्निने अवस्था हुन्छ । अनि मृगौला बिग्रने सम्भावना हुन्छ ।
सरकारले यो रोगलाई अनुदान दिएको छ कि छैन ?
सुमेरु अस्पतालले मृगौलाको रोगको उपचार गर्न आउने विरामीलाई सरकारसँग एक लाख रुपैयाँका सुविधा लिएको छ । मृगौला चेकचाँच गर्न आउने विरामीहरुमा क्रेटिनिन् बढी देखिएको अवस्थामा, मृगौला रोगको लक्षण देखिएको अवस्थामा त्यस्ता विरामीलाई स्थानीय तहको सिफारिसको आधारमा एक लाख बराबरको औषधी उपचार गर्ने गरेका छौं । बिरामीको क्रिटिकल अवस्था देखिएको खण्डमा थप चाँच गर्नु पर्ने अवस्था आयो भने, पिसावमा प्रोटिन लिक भएको पाइयो भने र मृगौलाको सानो टुक्रा मासु निकालेर किड्नी वायोप्सी पनि गर्नुपर्ने हुन्छ । आर्थिक अवस्था कमजोर भएका विरामीहरुलाई एक लाख रुपैयाँले ठूलो काम गरेको हुन्छ । आर्थिक अवस्था राम्रो भएका विरामीहरुले भने सरकारद्धारा वितरण गरिएको यस्तो सहयोगको अपेक्षा नगरेको पनि पाइएको छ । विपन्न वर्गका मृगौलाका विरामीहरुलाई यो एक लाख रुपैयाँले रोग कस्तो अवस्थामा रहेको छ त्यो पत्ता लगाई अब कसरी उपचार गराउन सकिन्छ भन्ने बारे पनि सहज अवस्था सिर्जना हुन्छ । हाम्रो अस्पतालमा उपत्यकाबाहेक उपत्यका बाहिरका विरामीहरु पनि चेकजाँच गर्न आउनुहुन्छ । उहाँहरुलाई सरकारले मृगौला रोगका लागि यस्तो सुविधा दिएको छ भनी जानकारी सहितको सिफारिसका लागि हाम्रो हेल्प डेक्स छ, हेल्प डेक्सले सबै व्यवहोरासहितको सिफारिस लेख्ने काम गर्छ अनि हामीले सम्बन्धित निकाय गाउँपालिका, वडा, नगरपालिकालाई सिफारिस पठाउने काम गछौं, अनि त्यो निकायको सिफारिसमा ठिक छ भनी सिफारिस आएमा एक लाख रुपैयाँसम्मका औषधी उपचार गराउने गरेका छौं । एक लाख रुपैयाँले भ्याउनजेल अस्पतालले निःशुल्क उपचार गर्ने गरेको छ ।
मृगौला फेर्नका लागि सरकारले कस्तो प्राधानहरु अप्नाएको छ ?
हाम्रो देशको नियम के छ भने नजिकको नातेदारले मात्र मृगौला दान दिन पाउने कानुन छ । विदेशमा भन्ने हो भने प्राय देशमा आफुले चाहेको विरामीलाई आफ्नो इच्छाले मृगौला दान गर्न सक्छन् । तर, हाम्रो देशमा भने मृगौला बेचबिखन हुने भएका कारण नजिकको नातेदारले मात्र मृगौला दिनसक्ने प्रावधान छ । सरकारले यस बारेमा सोचेर कानुन सच्याउनु पर्ने अवस्था छ । विशेष गरी बे्रन देथ भएका व्यक्तिको मृगौला काम लाग्न सक्छ । मृगौला पनि मृतउपरान्त दान गर्ने प्रावधानहरुका बारे आवाज उठिरहेका छन् । हामीहरुको मिटिङमा पनि यस्ता कुराहरु उठिरहेका छौ ।
कस्तो अवस्थामा डायलासिस गर्नुपर्छ ?
यसको पनि दुईवटा पाटाहरु छन् । एकेआई (एक्युट किड्नी इन्जुरी) हो भने एक्कासी मृगौला बिग्रिएर सास फेर्न गाह्रो भयो भने, पिसाव कम भयो भने, पानी बढी भयो भने, एसिड बढी भयो भने, पोटासियम बढ्यो, फोहोर बडी भने पनि यस्तो अवस्थामा हामीले डायालासिस गर्छौं । यसरी एक्कासी मृगौला बिग्रिएको अवस्थामा भने ६० प्रतिशतसम्म रिकभर हुने गर्छ । एकेआइको कज मेबी मृगौला इन्फेक्सन, दुखाई कम गर्ने पेनक्लीयर खाँदा, विभिन्न औषधी खाँदा सेवन गर्दा मृगौला बिग्रिएको छ भने डायलासिसबाटै रिकभर हुनसक्छ र पछि डायलासिस नगर्नुपर्ने अवस्था पनि हुनसक्छ । तर, पहिलेदेखि नै मृगौला कमजोर बन्दै गएको र क्रेटिनिन् बढेको अवस्थामा भने सीकेडी स्टेज फाइभ (इजीएफआर—१५एमएल) छ भने विरामीको सिम्प्टोम्याटिक छ भने डायलासिस सुरु गराउँछौं । हप्ताको दुइ—तीन पटकसम्म डायलासिस गर्नुेपर्ने अवस्था आउनुका साथै मृगौला पत्यारोपण गर्नुपर्ने अवस्था समेत सिर्जना हुनसक्छ ।
डायलासिस गरेका व्यक्तिहरुको चाडै मृत्यु हुने मुख्य कारण मुटुको कम्प्लीकेशन र इन्फेक्सन हो । डायलासिस गरेका व्यक्तिहरुमा सुरुवातको एक महिनादेखि एक वर्षसम्म महत्वपूर्ण हुन्छ । १०—१५ प्रतिशत विरामीको मृत्यु डायलासिस सुरु गरेको १—२ वर्षभित्र हुन्छ । हामीले २५ वर्ष बाँच्न सफल विरामी आधाजस्तो देख्छौं, तर ५ देखि १० वर्षसम्म डायलासिस गरेर बाँच्ने विरामीहरु धेरै कम छन् । तर हाम्रो देशमा कति जनाको मृत्यु हुन्छ भन्ने इक्ज्याक्ट तथ्यांक भने छैन ।
अमेरिकाको डाटामा ३ वर्ष बाँच्न सफल ५७५, ५ वर्ष बाँच्न सफल ४२५ छन् । नियमित डायलाईसिस, खानपिनदेखि शारीरिक व्यायाम र डाक्टरको सल्लाह अनुसार चलेको खण्डमा लामो समयसम्म पनि बाँच्न केही मदत गर्न सक्छ ।
डायलासिस गरेका विरामीहरुले इन्फेक्सनबाट बच्न के के उपायहरु गर्नुपर्ने हुन्छ ?
चिकित्सकको सल्लाहअनुसार लिस्ट अनुसार खानपिन, चुरोट रक्सी नखाने, योगा, व्यायाम गर्नुका साथै निमोनियाबाट बच्नका लागि तालिका अनुसार भ्याक्सिन लगाउनुपर्छ । हेपाटाइटिसका खोप लगाउनुका साथै भिडभाडमा नजाने, विरामीहरुबाट टाढै रहने, बाहिर निस्कन परेको खण्डमा माक्स प्रयोग गर्ने गरेको खण्डमा पनि इन्फेसक्सनबाट बच्न मदत गर्छ ।
कस्तो अवस्थामा मृगौलाको प्रत्यारोपण गर्नुपर्छ ?
मृगौला बिग्रने अवस्था सीकेडी स्टेज ५ मा पुगेपछि, हप्ताको २— ३ पटक डायलासिस गर्नुपर्ने अवस्था भएमा मृगौला
प्रत्यारोपण बाहेक अन्य बिकल्प छैन । एउटा हेमो डायलासिस यो डायालासिस भनेका मेसिनमा रगत सेफ गरेर गर्छौ । अर्को पेरिटोनेल डायलासिस यो डायालासिसमा सानो अप्रेशन गरेर पेटमा पीडी क्याथेटर राख्छौं । दुई लिटर पानी पेटमा पीडी क्याथेटर (पाइपबाट) डायलासिस गरी फोहोर विकारहरु फाल्ने काम गरिन्छ । यो दैनिक तिनचोटी गर्नुपर्ने हुन्छ । यो अवस्थामा पुगेका विरामीहरुलाई सबैभन्दा राम्रो उपाय भनेको मृगौला प्रत्यारोपण नै हो । प्रत्यारोपण गर्दा विरामी हिँडडुल गर्ने, काम गर्न जाने अवस्था रहन्छ ।
मृगौला महँगो रोगको रुपमा हेरिन्छ । मृगौला फेर्न परेको अवस्थामा कतिको खर्च लाग्छ ?
यो रोग महँगो रोगकै रुपमा हेरिने गरिन्छ । सरकारी अस्पतालमा मृगौला ट्रान्सफर गर्दा केही सस्तो लाग्ने हुन्छ भने प्राइभेटमा गर्दा अलिकति महँगो पर्न आउँछ । सरकारले मृगौला ट्रान्सफर गर्न भनेर झण्डै चार पाँच लाख रुपैयाँ सरकारी अस्पतालमा दिने गरेको छ । विरामी ट्रान्सफर गर्न रेडी भएको अवस्थामा मात्र दिने गर्छ । तर, ट्रान्फर गर्नुभन्दा अगाडि चेकजाँच, औषधी आदिमा विरामी आफैले खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । यसरी चेकजाँच गर्दा एक डेढ लाख रुपैयाँ लाग्छ । सरकारी अस्पताल जस्तै टिचिङ, विर, मानव अंग प्रत्यारोपण केन्द्र भक्तपुरलगायतको अस्पतालमा मृगौला ट्रान्सफर गरेको खण्डमा सस्तो पर्न आउँछ । तर, प्राइभेट अस्पतालमा मृगौला ट्रान्सफर ग¥यो भने यति नै लाग्छ भन्न सकिँदैन । किनकी आ—आफ्नो हिसावले गर्ने गर्छन् । सुमेरु अस्पतालले भने सरकारलाई सुरुदेखि नै बिरामीलाई सरकारी अस्पतालमा दिने चार पाँच लाख रुपैयाँको सुबिधा हामीलाई दिनुहोस्, हामी त्यही शुल्कमै मृगौला ट्रान्सफर गछौं भनेर भनेका छौं । तर सरकारको तर्फबाट अहिलेसम्म कुनै निर्णय आइसकेको अवस्था छैन ।
सुमेरुले त निःशुल्क रुपमा पनि मृगौला ट्रान्सफर गरेको थियो होइन र ?
अहिलेसम्म सुमेरु अस्पतालले पाँच जनाको सफल मृगौला प्रत्यारोपण गर्ने कार्य गरिसकेको छ । त्यसमध्ये दुई जनाको पूर्णरुपमा निःशुल्क गरेका छौं भने अन्य तिन जनालाई पनि जेनियुन शुल्कमै मृगौला ट्रान्सफर गर्ने कार्य गरेका छौं । ट्रान्सफर गर्दा झण्डै दुई तिन लाख पर्ने एटीजी औषधी चलाउनु पर्छ त्यसको लागि हामीहरुले फार्मेसीमा तीन लाख बराबर रुपैयाँ जम्मा गर्न लगाउँछौं । विरामीको अवस्था र वेट हेरेर औषधी चढाउनु पर्छ, कहिलेकाहिँ बढी पनि चढाउनु पर्ने हुन्छ भने कहिले काहिँ दुई लाख बराबरको औषधीले पनि पुग्ने हुन्छ । त्यसैले बढी लागे थप्नु पर्ने हुन्छ भने कम लागे पछि पैसा फिर्ता हुन्छ । अस्पतालमा मृगौलो दिने व्यक्तिलाई झण्डै सात दिन भर्ना गर्छौं भने मृगौला फेर्ने विरामीलाई भने १० दिन भर्ना गरिन्छ । मृगौला झिकिसकेपछि र फेरे पछि दुबैलाई केही दिन आईसीयुमा राख्नुपर्ने हुन्छ । विरामीलाई चाँडै नै रिकभर भएर सामान्य अवस्था बन्यो भने सात लाख रुपैयाँमै सबै काम हुन्छ । कतिपय विरामी रिकभरमा ढिला भयो भने त्यही अनुसारको खर्च बाढि लाग्ने हुन्छ । यसरी अस्पतालमा करिब चार लाख रुपैयाँ जति खर्च हुन आउँछ । मृगौला फेर्दा करिब सात आठ लाख रुपैयाँ खर्च हुन आउँछ । वास्तवमा सुमेरु अस्पतालले अहिले नाफामुलक भन्दा पनि सेवामुलक ढंगले मृगौला रोगीहरुको उपचार र मृगौलो फेर्ने कार्य पनि गर्दै आइरहेको छ । सुमेरु अस्पतालले सरकारले दिने विरामीको उपचार खर्च चार पाँच लाख रुपैयाँ पायो भने विरामीले बेलैमा किड्नी ट्रान्सप्लान्ट गर्न सक्छ । धेरै विरामीको आर्थिकभार थाम्न नसकेर सरकारी अस्पतालको क्युमा जान वाध्य हुनुपर्छ । उहाँहरुले हामीहरुलाई घरीघरी सरकारी सुविधा आयो कि छैन भनेर सोध्नुहुन्छ । त्यो सुविधा भयो भने धेरै विरामीले चाँडै किड्नी ट्रान्सप्लान्ट गर्न पाइन्थ्यो कि भनेर आशावादी हुनुहुन्छ । सरकारले यतातर्फ ध्यान दिन अनुरोध गर्दछु ।
डा. साव कस्ता कार्यहरु गर्दा यो रोगबाट बच्न सकिन्छ ?
यो रोगबाट बच्ने मुख्य उपाय भनेको कम्तिमा पनि एक वर्षमा मृगौला सम्बन्धी चेकजाँच गराउने । बच्चादेखि बुढासम्मलाई युरिन रोउटिन टेस्ट, सेरुम क्रेटिनिने टेस्ट र युएसजी गर्नुप¥यो । यदि सुरुवात समयमै मृगौलामा समस्या देखियो भने फरदर इभालुसन गरेर औषधी उपचारबाट ठिक पार्न सक्छौं । मृगौलाको अवस्था कस्तो छ, कुन लेबलमा बिग्रिएको छ त्यो अनुसार हामीले उपचार गराउन सक्छौं । यदि धेरै नै बिग्रिएको अवस्थामा छ भने पनि त्यसलाई कुन उपचार विधि अप्नाउदा ठिक हुन्छ भनेर भविष्यको लागि प्लान सक्छौं । धेरै नै बिग्रीएको अवस्थामा छ भने पनि फिस्टुला बनाउँछौं । फिस्टुला बनाएको ८ देखि १० हप्ता पछि मात्र हेमोडायलासिस गर्न मिल्छ । यसरी उपचारको विधि अप्नाउन सकिन्छ । पेटबाट गर्ने डायलासिस पनि प्लान गरेर गर्न सक्छौ । बिरामीलाई परिवारले आत्मबल बढाउने काम गरेको खण्डमा उनीहरुको दैनिक कामकाज पनि गर्न सक्ने अवस्था हुन्छ । समयमा आएर डायलासिस गर्ने अनि त्यसपछि आफ्नो काममा फर्कने पनि गरिरहनुभएको छ । कतिपय विरामी औषधी सेवन गरी दैनिक कामकाज गरिरहनु भएको छ । कतिपय विरामीहरु डायलासिस गरेर ठिक भएर पनि जानु भएको छ भने कतिपय विरामीहरु ठिक भइसकेपछि पनि फेरि मृगौलामा समस्या देखिएको भन्दै डायलासिस गर्न आउनुुभएका विरामीहरु पनि हुनुहुन्छ । विरामीलाई कस्तो किसिमको उपचार गर्ने । विरामीको आत्मबल कसरी बढाउने, क्वालिटी अफ लाइफ कसरी बेटर गर्ने भन्ने कुरामा परिवारको पनि ठूलो हात हुन्छ ।
प्रकाशित मिति: आईतबार, असोज ४, २०७७, ११:१९:००